5 wabvisa peji zviito zvekuvandudza yako eCommerce SEO | ECommerce nhau
Chekutanga pane zvese, uye kutanga ne, fungidziro yezve chinhu chinhu chechinyorwa chino kubvira SEO kubva peji ndiko kuiswa kweakateedzana matekiniki anotarisana nekubudirira kwekunze zvinongedzo zvinonongedzera kuwebsite yedu ku natsa nzvimbo yako kubva kwakasiyana mapoinzi muchirongwa chinofanirwa kuitwa. Iko kwaunogona kukudziridza akati wandei kure zviito zvepeji kuvandudza iyo SEO yeCommerce yako.
Kubva pane ino nzira yekujaira isu tichazokuratidza nenzira yakapfava uye inoshanda chaiyo yeaya masosi ekushandisa muchitoro chako kana kutengeserana kwedigital. Vamwe vavo vanozozivikanwa nevashandisi, asi zvirokwazvo vamwe vanozopa kubata kwekutanga uye kwekutanga mune zvaunofanira kuita kubva ikozvino. Iko kuchengetedzwa mune zvido zvehunyanzvi chiitiko chako kuchakunda kupfuura zvese.
Izvo zvakakosha kuti iwe utore kufunga izvozvi kuti izvi zviito kana marongero akakosha zvakanyanya chinhu kusimudzira bhizinesi rako chero nguva. Mune mamwe mazwi, kuita Yekuburitsa Peji SEO hakuchazove kungovaka zvinongedzo, asi kuzviita mune inoenderana nemufananidzo kana chinangwa chatinoda kushamwaridzana newebsite yedu kana chiratidzo chedu. Uye izvi ndizvo zvatiri kuzosangana nazvo kuburikidza ne kunze kwezviito zve peji kugadzirisa SEO yako eCommerce.
1 Off peji: kuwana kukuru kuonekwa
2 Gadzira chiratidzo chekuvimba uye mhando
3 Govera zvemhando yepamusoro zvemukati
4 Tsanangura dingindira rakakodzera nebasa redu
5 Tarisa SEO pane mamwe ecommerce zvigadzirwa machira
Off peji: kuwana kukuru kuonekwa
Chekutanga pane zvese, zvinodikanwa kuti upe chinhu ichi mukati medanho rekusimudzira iyo SEO yeCommerce yako kana chitoro chepamhepo. Uye ndeipi nzira iri nani pakupera kwezuva pane kuwana kukura kukuru uye kusazivikanwa mukati mechikamu chedu, zvisinei nekuti inogona kupa zvakawanda zvinongedzo kuchimiro chedu. Ndokunge, kuti isu tinozivikanwa uye tinozivikanwa pane ane mukurumbira mawebhusaiti ane hukama nebasa redu kana chimiro chevatariri vedu vateereri. Iyi inzira inoshanda kwazvo yekuedza kuwana vatengi kana vashandisi kuti vatizive kubva zvino zvichienda mberi.
Chero zvazvingaitika, kushanda kwayo kunoda simba rakakura mune zvese zviito zvedu, inova ndiyo zano iri zvishoma kupfuura zvakajairwa. Inofanirwa kuitiswa zvishoma nezvishoma kusimudzira kana kuzadzikisa kuoneka uye kusazivikanwa kwemutsara webhizinesi redu munguva inokurumidza kwazvo. Pasina kuita zvikanganiso uye neakateedzana nhanho dzekuchengetedza kuti usatsauke kubva kune zvinangwa zvakatemwa kubva panguva iyoyo zvichienda mberi
Gadzira chiratidzo chekuvimba uye mhando
Kune rimwe divi, imwe yemaitiro ayo anogara achiwanzo kupa mibairo yakanaka kwazvo ndeaya anosanganisira kuyedza kuti tiwane kushanya kwakakodzera. Izvi zvinogona kuwanikwa, kungave kuburikidza nekunze zvinongedzo kana chero imwe nzira, senge pasocial network kana anotsigirwa kushambadzira. Kusvika padanho rekuti zvibodzwa zvinogona kuzadzikiswa nekukurumidza zvakanyanya kupfuura kuburikidza nemamwe emhando dzekutengesa dzakananga.
Tichiri kune rimwe divi, isu hatigone kukanganwa izvozvi chinonzi brand yakatendeka nekuti inogona kutipa mabhenefiti anotevera atinozofumura pazasi:
Simudzira chiratidzo chevatengesi pamusoro pezvimwe zvakateedzana zvekufunga nezvehunyanzvi. Zvekuti nenzira iyi chinzvimbo chedu chehunyanzvi chiitiko chiri munzvimbo iri nani kupfuura pakutanga kuita zano rakakosha.
Vhura nzira dzekutaurirana dzinobudirira nevatengi vedu nevashandisi kuti tikwanise kuvapa rumwe ruzivo nezve zvigadzirwa kana masevhisi edu. Nematanho ekutaurirana ayo anozonyanya kusimba uye kuomarara.
Chinja iyo pfungwa yekuti mutengi chikamu checheni yakakosha mune ino maitiro. Uye izvo zvatinofanirwa kuzviita chikamu chehungwaru hwedu mukati mekambani yedhijitari. Kunyangwe paine njodzi yekuti tinogona kuzvitutumadza pamusoro pezvinangwa zvakagadzwa kubva zvino zvichienda mberi.
Izvo, shure kwezvose, hurongwa hunobatsira vanhu kuti vabatanidzwe neyekushambadzira brand yatiri kusimukira. Kupa pfungwa yehunhu uye sevhisi iri kupfuura kwekupokana munzira dzatinoita.
Uye pakupedzisira, kushingairira kuchinjika kune hutsva hutsika iyo kushambadzira kwedhijitari inotipa uye iyo ine isingagumi nhamba yekushandisa uye kubva kune ese maonero maonero ekuvandudzwa kweprojekiti yedu mudhijitari chikamu.
Govera zvemhando yepamusoro zvemukati
Chimwe chiitiko chekuongorora panguva ino ndicho chine chekuita nehunhu hwemukati hwatinopa kune webhusaiti yechitoro chedu kana chitoro chepamhepo. Mupfungwa iyi, hatigone kukanganwa muchikamu chino cheichi chiitiko chakakosha ichi chakakosha kwazvo bhizinesi zvido yezvinhu izvi. Kusvika padanho rekuti kushanya kwako hakuzo sanganise nechero mhedzisiro, kupfuura nhamba isina kukosha chaiko.
Kune rimwe divi, zvinofanirwa kutarisirwa mupfungwa kuti kusarongeka kweSEO optimization kana uchitsvaga mazwi akakosha kana kuongorora kuti makwikwi anozvimisa sei, anogona kutikonzera kurasikirwa nemikana yekukwezva zvinongedzo kana kushanya. Nekuti ichi chinhu chinogona kukonzera vashandisi kuti vasabatanidze webhusaiti yedu kana marangi nemazwi akakosha akabatana nehunyanzvi chiitiko chatinoita mune ino bhizinesi. Beyond imwe nhevedzano yehunyanzvi kufunga.
Kunge hongu, mukupedzisira isu takaita basa rakanaka rekugadzirisa Off Peji, chiratidzo chedu, pamwechete nehukama hweduIwe unenge uine yakasarudzika kurapwa mune midhiya yakabatana needu nyanzvi basa. Mhedzisiro yakatwasuka yeiyi nzira yakambofungidzirwa ndeyekuti pakupedzisira ivo vanozotemerwa zvakanyanya kupedzisa shanduko chaiyo pawebhusaiti yedu. Naizvozvo, kumisikidzwa kwayo kuchavandudzwa zvakanyanya uye nekudaro huwandu hukuru hwevatengi nevashandisi hunosvika.
Tsanangura dingindira rakakodzera nebasa redu
Hatigone kusiira kumashure iyo chokwadi chekuti isu tinofanirwa kuendesa zvinongedzo zvinobva kumawebhusaiti izvo zvine zvakawanda zvekuita nebasa redu kana zvirimo muwebhusaiti yedu. Nekuti neimwe nzira, inogona kunge iine yakakwana zvinopesana nezvinangwa zvatinotsvaga. Kusvika pakuti inogona kukuvadza zvido zvedu mukati medanho ratiri.
Pane kudaro, kusarudza dingindira rakakodzera nebasa redu kunogona kuunza zvakawanda zvakawanda kupfuura zvataifunga kubva pakutanga. Nezve kusimudzira bhizinesi redu redhijitari kubva pane zvinotevera zviito zvatichazokupa kwauri panguva ino:
Tichawana izvozvo taura zvakawanda nezvedu uye chii chakakosha neakanyanya kunaka maonero kupfuura pakutanga.
Unogona kusazviziva, asi kupa zano rakakodzera nebasa redu kunogona kutungamira padanho re mutengi kuvimbika kana vashandisi vakanyanya kusimba kubva pakuitwa kwechirongwa ichi mukushambadzira kwanhasi.
Iyo inogona kuendesa chiyero kune vatengi kuva vanogamuchira zvakanyanya kune ako ekushambadzira zvirevo zvezvigadzirwa kana masevhisi iwe aunopa kubva kune yako nyanzvi chiitiko.
Imwe yemhedzisiro yakatwasuka ndeye iyo ine chekuita nedhigiri re chivimbo yakapihwa nemamwe mativi eichi chiitiko. Uye kuti muzviitiko zvese inogona kuve yekusimudzira chaiko yekusimbisa hukama hwekutengeserana pakati pemativi ese, uye zvakanyanya kupfuura zvese, nenzira inoshanda kwazvo.
Chimwe chezvipo zvake zvakakosha zvinobva pachokwadi chekuti kupa dingindira rakakodzera nebasa redu kunoratidza chimwe chinhu chakajeka sekunge iwe unoda kusarudzira mune yakasarudzika niche yemusika. Iko kuita nekukurumidza uye kwekutora danho pamhedzisiro inogona kuitwazve kubva panguva dzino kunenge kuri kusarudza.
Tarisa SEO pane mamwe ecommerce zvigadzirwa machira
Hapana mubvunzo kuti zano iri rinowana kuti iwe uzadzise zvinangwa zvako zvinokurumidza. Akazviita sei? Zvakanaka, kuburikidza nechimwe chinhu chiri nyore sezvazviri kutsvaga zvakanyanya zvimwe zvigadzirwa zvemhando. Uye izvo izvo, iwe unofanirwa kuvapa yakakurudzirwa chaiyo nzira yakanangana ne wedzera peji yechigadzirwa. Pakupera kwezuva zvichave zvakakosha kuti iwe ugone kutengesa zvigadzirwa zvako, masevhisi kana zvinhu zvinemazvo kupfuura izvozvi.
Ichi ndicho chimwe chezvikonzero nei pawebsite yako iwe uchifanira kupa akati wandei ecommerce chigadzirwa mafaera. Saka kuti vatengi vave nemafungiro akawanda pamusoro pekumisikidza sarudzo yavo mukushambadzira. Iwe uchaona kuti sei mune pfupi nzvimbo yenguva iwe uchazadzisa zvinangwa zvako zvaunoda mukati meiyi chikamu chekutengeserana. Izvo zvakakosha kuita nekuti hazvitombokuodza moyo uye zvinokutendera iwe kuzadzisa akawanda zvibodzwa zvawakazvigadzirira iwe pachako mune rako rehunyanzvi chiitiko. Iko kwauchazongofanira chete kuisa zvimwe zvekuregedza peji zviito pachikamu chako kuti uvandudze SEO yeCommerce yako yatakakurudzira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » SEO » 5 wabvisa peji zviito zvekuvandudza iyo SEO yeCommerce yako